I-Realme izakuvula iivenkile zayo zokuqala kulo nyaka eIndiya | I-Androidsis
Realme yenza ukungena kwayo kwimakethi ye-smartphone yaseIndiya kunyaka ophelileyo njengesebe le-OPPO. Iifowuni zayo ezikudidi olukumgangatho ophakathi nazo ziye zaziswa eIndonesia naseVietnam. Kulo nyaka, inkampani iceba ukukhula ngakumbi kwaye inxenye yezicwangciso zayo kukuvula iivenkile ezibonakalayo.
Umphathi weNkampani uMadhav Sheth ukutyhile oko cwangcisa 'ukuvula iivenkile ezikhethekileyo eIndiya Apho abathengi abanokubakho banokufumana amava ezandla kwipotifoliyo yesixhobo seRealme eya kubandakanya izixhobo kunye nee-smartphones. Ezi venkile ziya kuqala ukuphuma e-India kwisiqingatha sesibini sonyaka, ngokweqikelelo.
Ngeli xesha, Ii-smartphones ezinophawu lwangempela zingathengwa ngaphandle kweintanethi kwiivenkile zamaqabane. Ekuqaleni abathengi abanomdla ababengafuni ukuthenga kwi-Intanethi babenokuzifumana kuphela kwiivenkile zeReliance, kodwa ngoku bayasebenzisana neevenkile ezahlukeneyo zentengiso ezifumaneka kwizixeko ezahlukeneyo zaseIndiya.
U-Realme ukwatyhile izicwangciso zakhe zokuphinda kabini imveliso ngokuvula umzi-mveliso omtsha eGreater Nodia. Sele unayo enye, kodwa iceba ukwandisa imveliso yayo yangoku phakathi kwe-60 kunye ne-80 yezigidi ze-smartphones ngonyaka. Umenzi uya kubhengeza iimodeli ezintsha kulo nyaka, njengoko kulindelwe kakuhle.
Kwikota yesine ye-2018, uPhando lweNqaku loPhando lathi Inkampani yayinesabelo esiyi-8% sentengiso. Umvelisi oqale njenge-sub-brand ye-OPPO ngoku yinkampani ezimeleyo, njengoko besixele ngaphambili ngexesha lokuba usekela-mongameli we-OPPO washiya inkampani ukuba abe yi-CEO yeRealme kwaye ayinike ingqwalaselo ebanzi. Kusenokwenzeka ukuba ekuqaleni kolwandiso lwe brand, kwaye sikubonisa oku ngenxa yeendlela zokuthengisa ebezisenziwa kwiimarike ezahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Realme izakuvula iivenkile zayo zokuqala kulo nyaka